Madaxa Puntland oo qaba in kufsiyada Puntland la soo abaabulo xilli banaanbax dhacay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxa Puntland oo qaba in kufsiyada Puntland la soo abaabulo xilli banaanbax dhacay
Madaxa Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo welli ku sugan Imaaraadka halkaas oo uu kulamo la qaatey shirkada dhiigmiiratada ah ee Dp World ee qaska ka wada Somaliya ayaa qaba in kufsiyada ka dhaca Puntland la soo abaabulo.
Waa masuulkii ugu horeeyay ee qaba in kufsi yahay wax la soo abaabulo oo mashruuc laga dhigto. Maanta waxa magaalada Garoowe ka dhacay banaanbax aamusnaana oo ay dhigeen haween dalbanaya in cadaalad ay helaan caruurta la kufsado.
”Waxaan hadalka ka dhadhansan karnaa in uu ku fashilmey oo aanu rabin in ay cadaalad hesho Caasho Ilyaas oo laba bilood kahor si xun loo diley markii la kufsaday kadib.
Dadka kufsigii loo haysto ayaa dabada ka galay qabiil maamulkuna ma awoodo inuu faraha la galo arimaha qabiilka waayo waa far far ku tag, waana halka nidaamka qabiliga ah ee federal ku sheegay ka socon Karin ayuuyiri Xuseen Mire oo Gaalkacayo jooga.
Siciid Cabdullaahi Deni oo la hadlaayay jaaliyada Puntland ee ku sugan Imaaraadka habeenkii xalay ayaa yiri sidan: kufsiga iyo dilka is xambaarsan ee lagula kacayo gabdhaha da’ada yar, waa dhaqan-xun oo hadda soo kordhay, una baahan in baaritaan dhab ah lagu sameeyo cidda soo abaaabusha, si tallaabo adag looga qaado.
“Waa daahiro cusub oo baaritaan dhaba u baahan, marka waxaan saarnay guddi xaqiiqada soo raadiya, marka arrintaasi waxay u baahantahay in aan si qoto dheer u baarno, cid kasta oo ka dambaysana tallaabo adag laga qaado” ayuu yiri Siciid.
Wuxuu dhinaca kale sheegay in Puntland keyd lacageed samaysatey inkastoo anu faahfaahin halka lacagtaas laga keenay.
Sawirka hoose haween bananbax aamusnaan dhigey